ကြိုရမည့်နေရာတွင် ခရီးသည်မရှိသည့်အခါ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ – Driver
ပြီးခဲ့သော အလုပ်များ၏ အခက်အခဲများ
ကြိုရမည့်နေရာတွင် ခရီးသည်မရှိသည့်အခါ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ
သင်သည် ခရီးသည်အားကြိုရမည့်နေရာ Pick-Up နေရာသို့ရောက်ပါက ပထမဦးစွာ “I’ve Arrived” ကို အရင်နှိပ်ပါ။ ထိုအခါ ခရီးသည်ထံသို့ ကြိုရမည့်နေရာတွင် သင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း စာတို (Message) ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ ခရီးသည်က ကြိုရမည့်နေရာ (Pick-Up) နေရာတွင် မရှိပါက GrabChat မှတဆင့် စာတိုပို့ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ဆက်သွယ်သည့်အခါတွင် ခရီးသည်က သင်၏ဆက်သွယ်မှုကို ချက်ချင်းမတုံပြန်နိုင်ခြင်းလည်း ရှိနိင်ပါတယ်။ ထိုအခါတွင် သင့်ခရီးသည်ကို စောင့်ဆိုင်းသည့်အချိန်အတွက် အခကြေးငွေ ကောက်ခံကြောင်းကို GrabChat မှတဆင့် စာတိုပေးပို့၍ ကြိုတင်ပြောပြရန် တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ (GrabShare အတွက် အခမဲ့စောင့်ဆိုင်းချိန် ၃ မိနစ်သတ်မှတ်ထားပြီး တခြားဝန်ဆောင်မှုများအတွက် စောင့်ဆိုင်းချိန် ၅ မိနစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်) ခရီးသည်နှင့် လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာတွေ့ဆုံနိုင်ရန် သင်ရောက်ရှိနေသည့်နေရာအတိအကျနှင့် သင့်ကားအရောင်ကို ခရီးသည်ထံသို့ အသိပေးထားခြင်းကလည်း ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ သတ်မှတ်ထားသည့်စောင့်ဆိုင်းချိန်ပြည့်သည့်တိုင်အောင် ခရီးသည်မှ သင်၏ဆတ်သွယ်ချက်ကို ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိပါက ခရီးစဉ်ကို သင်ကိုယ်တိုင်ပယ်ဖျက်နိုင်ပြီး Passenger no-show ဆိုသည့် အကြောင်းပြချက်ကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
သတိပြုရန်မှာ သင့်အနေနှင့် ခရီးစဉ်ပယ်ဖျက်နှုန်းထားကို မထိခိုက်စေသည့် အောက်ပါအကြောင်းပြချက်များဖြင့် တစ်ပါတ်လျှင် ၆ ကြိမ်သာ ပယ်ဖျက်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
- Passenger no show (ခရီးသည်မလာခြင်း/ကြိုရမည့်နေရာတွင်ရှိမနေခြင်း)
- Passenger is withachild
- Passenger is withapet (ခရီးသည်တွင် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ပါလာခြင်း)
- Too many passengers or luggage (သတ်မှတ်ထားသည့်ခရီးသည်အရေအတွက်ထက်ပိုများနေခြင်း/အထုပ်အပိုးများနေခြင်း)
- Can’t pick up at location (တည်နေရာတွင် သွားရောက်ခေါ်ယူမရနိုင်ခြင်း)
မေး - ခရီးစဉ်ပယ်ဖျက်ရန်အတွက် ကန့်သတ်ထားသည့်အကြိမ်ရေမပြည့်သေးသော်လည်း "Passenger no-show” ကို ဘာကြောင့်မတွေ့ရတာလဲ?
ဖြေ - သင့်အနေနှင့် ခရီးသည်အားကြိုရမည့်နေရာသို့ ရောက်ပြီး “I’ve Arrived” ကို နှိပ်၍ ၅ မိနစ်စောင့်ပြီးမှသာ "Passenger no-show” ကို တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး - ကြိုရမည့်နေရာသို့မရောက်ခင် ကြိုတင်ပြီး "I've Arrived" ကို နှိပ်ပါက ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ?
ဖြေ - သင်၏ လက်ရှိတည်နေရာက ခရီးသည်ရွေးချယ်ထားသော ကြိုရမည့်နေရာ (Pick-up) နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း သတိပေးချက်ကို လက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါတွင် သင့်အနေနှင့် ခရီးစဉ်ပယ်ဖျက်ခြင်းကို ဆက်လက်ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက "Passenger no-show" ကိုရွေးချယ်ထားသော်လည်း ခရီးစဉ်ပယ်ဖျက်ခြင်းနှုန်းထား (Cancellation Rate) ကို ထိခိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်အနေနှင့် အမှန်တကယ်ကြိုရမည့်နေရာသို့ရောက်မှသာ "I’ve Arrived" ကို နှိပ်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။
မေး - သတ်မှတ်ထားသည့်စောင့်ဆိုင်းချိန် ၃ မိနစ်မပြည့်ခင် ခရီးစဉ်ပယ်ဖျက်မည်ဆိုပါက ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ?
ဖြေ - ခရီးစဉ်ပယ်ဖျက်ခြင်းအကြောင်းပြချက်တွင် "Passenger no-show" ဆိုသည့်ခလုတ်ကို နှိပ်၍ မရနိင်ပါ။ သင့်အနေနှင့် တခြားအကြောင်းပြချက်များကိုသာရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ခရီးစဉ်ပယ်ဖျက်ခြင်းနှုန်းထားကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
မေး - ကြိုရမည့်နေရာကို အမှန်တကယ်ရောက်ရှိပြီး ခရီးစဉ်ပယ်ဖျက်ရာတွင် "Passenger no-show" ကို ရွေးချယ်သော်လည်း ခရီးစဉ်ပယ်ဖျက်ခြင်းနှုန်းထားကို ထိခိုက်ခြင်းက ဘာ့ကြောင့်လဲ?
ဖြေ - အောက်ပါအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
"Passenger no-show" ကို အသုံးပြု၍ ပယ်ဖျက်ထားသော ခရီးစဉ်များ များပြားနေခြင်း
ကြိုရမည့်နေရာသို့ အမှန်တကယ်မရောက်သေးပဲ "I've Arrived" ကို နှိပ်ခြင်း
သင့်ဖုန်း၏ GPS မှာ မှန်ကန်စွာမပြခြင်း
မေး - ခရီးသည်က ကြိုရမည့်နေရာတွင် မရှိပါက ကျွနု်ပ်ကိုယ်စား Grab မှ ထိုခရီးစဉ်ကို ပယ်ဖျက်ပေးနိုင်မလား?
ဖြေ - Grab မှ သင်၏ကိုယ်စား ခရီးစဉ်ကို ပယ်ဖျက်ပေး၍မရနိုင်ပါ။ သတိပေးလိုသည်မှာ ခရီးသည်မှ အမှန်တကယ်စီးနင်းမှုမရှိပဲ ခရီးစဉ်ကို Complete (ပြီးဆုံး) လုပ်ထားပါက ကြီးမားသော မသမာမှုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
3311 out of 11059 found this helpful
ခရီးသည်မှ ကြိုရမည့်နေရာအား မှားယွင်းစွာ ရွေးချယ်ထားခြင်း
ခရီးသည်မှ ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားကို မှားယွင်းစွာ ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း
မသမာမှုများနှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်များအား အကြောင်းကြားရန်